घर » पहेली » आक्रोशित चरा जाओ पागल
खेल जानकारी: आक्रोशित चरा जाओ पागल
विवरण: आक्रोशित चरा ती pesky सुँगुरहरु को थकित छन् र यो समय तिनीहरूले पराजित गर्न पूरै नयाँ तरिका फेला परेन। तिनीहरूका राजा र recove पराजित गरेर आफ्नो कष्टप्रद व्यवहार अन्त राख्न आदेश मा सुँगुरहरु गुफा एउटा लामो र खतरनाक यात्रा मा रातो बर्ड मदत
नियन्त्रण: आक्रोशित चरा ती pesky सुँगुरहरु को थकित छन् र यो समय तिनीहरूले पराजित गर्न पूरै नयाँ तरिका फेला परेन। तिनीहरूका राजा पराजित र सबै चोरी सुनको अन्डा पुन आफ्नो कष्टप्रद व्यवहार अन्त राख्न आदेश मा सुँगुरहरु गुफा एउटा लामो र खतरनाक यात्रा मा रातो बर्ड मद्दत गर्नुहोस्। प्ले आफ्नो किबोर्ड तीर प्रयोग गरेर यो आक्रोशित चरा मंच खेल आनन्द लिनुहोस्।
(1 वोट,5को औसत 5.00 बाहिर)
खेल्नु: 422,441 ट्याग: क्रोधित बर्ड, क्रोधित बर्ड रियो, क्रोधित चरा खेल, क्रोधित चरा, क्रोधित चरा ठाउँ, चरा
हिउँ, सान्ता र छुट्टी सिजन लागि कडा प्रशिक्षण को तिनका साथीहरू ढाकिएको एक वन भित्र गहिरो। तिनीहरूले Pines अन्तर्गत खिलौने को धेरै प्रस्ताव गर्न चाहन्छु। मदत सान्ता, एल्फ, reindeer, Gingerbread मानिस वा हिममानब कट रूखहरू बीच कूद। हेरविचार बनाउन
SW? copters अनलाइन को
गाह्रो छ जो एक नयाँ शैली मा बर्ड Flappy र हामी एक नयाँ खेल हुनुहुन्छ। यो खेल मा, प्रोपेलर संग उड गर्न प्रयास वर्ण नियन्त्रणमा बाधाहरूलाई पारित गर्न प्रयास गर्दै प्रदान गर्दछ। बायाँ र दायाँ सेन्ट क्लिक गरेर आफ्नो वर्ण माउस
क्रोधित बर्ड Halloween वन
आक्रोशित चरा सबै चांद र खराब Piggies गोली मद्दत गर्नुहोस्।
क्रोधित चरा अन्डा प्राप्त
डोरी कूद क्रोधित चरा, कृपया क्रोधित चरा सकेसम्म उच्च हाम फाल्न मदत र संख्या वृद्धि गर्न थप अन्डा सङ्कलन। सुरु गर्न डब्ल्यू वा माथि प्रमुख प्रेस, शक्ति अप गर्न वस्तुहरू चयन गर्नुहोस्।
क्रोधित चरा जाने जाने
ब्रान्ड नयाँ आक्रोशित चरा खेल अन्त मा यहाँ छ। यो खेल को एक मारियो Kart प्रकार तपाईंले आफ्नो सबै भन्दा प्रेम चरा संग रेस हुनेछ जसमा छ। आक्रोशित चरा Kart को एक धेरै राम्रो खेल मा यो अचम्मको दौड लागि आफ्नो आत्म तयार हुनुहोस्। हामी लाग्यो केवल गर्दा त्यहाँ कुनै पनि हुनेछैन
झगडा क्रोधित चरा
सुंगुर र चरा बीच अनन्त लडाई पहिले लामो समय unleashed थियो। युद्ध मा धेरै वर्ष तिनीहरूलाई बलियो, angrier र अधिक हिंसात्मक बनाए। क्रोध द्वारा खपत, केही चरा बाँकी छन्, तर तिनीहरूले लागि देख गरिएको छ के पाउन सम्म तिनीहरूले दिन छैन अप।
क्रोधित चरा नायक उद्धार
खतरा गुलाबी क्रोधित चरा, खराब सुँगुर आउँदैछ छ। मद्दत गर्नुहोस्! को गुलाबी क्रोधित चरा squealing! चिन्ता नगर्नुहोस्, म यहाँ छु! रातो आक्रोशित चरा, बस समय मा देखा म रक्षा गर्नेछ! सबै खराब सुँगुरहरु बिट!
क्रोधित चरा ठाउँ स्वाप
त्यहाँ एक पंक्ति मा नै प्रकारको3वा बढी वर्ण हो भनेर, आक्रोशित चरा स्पेस देखि चरा व्यवस्था। चरा सार्न, चयन गरिएको वर्ण क्लिक गर्नुहोस् र त्यसपछि अर्को मा क्लिक, बायाँ छ कि तपाईंलाई ओ क्लिक पहिलो बर्ड माथि वा तल
रोलिंग क्रोधित चरा ठाउँ
आक्रोशित चरा रोलिङ रमाइलो भौतिकी खेल हो, आफ्नो काम सबै गुलाब आफ्नो प्रेम व्यक्त गर्न प्राप्त गर्न पुरुष क्रोधित बर्ड मदत गर्न छ। रोलिङ स्क्रिन तीर कुञ्जीहरू प्रयोग गर्नुहोस्।
क्रोधित चरा 2013 तर्साउने HOGS HD
आक्रोशित चरा 2013 तर्साउने HOGS HD खेल खेल्न र 2013 तर्साउने HOGS HD भिडियो, थप ह्याक आक्रोशित चरा 2013 तर्साउने HOGS HD आउँदैछ चाँडै आक्रोशित चरा हेर्न! राक्षस सुँगुर महल मा नयाँ खेल दृश्यहरु खेल, तपाईं को भूत को हरेक रंग को पत्ता छौँ
क्रोधित बर्ड सुपर पहेली
तिनीहरूलाई गायब बनाउन मा जस्तै क्रोधित चरा को समूह क्लिक गर्नुहोस्। सम्पूर्ण बोर्ड खाली गर्न प्रयास गर्नुहोस्
क्रोधित बर्ड पत्नी खोज्न
आफ्नो दिमाग प्रयोग आक्रोशित बर्ड पत्नी खोज्न मदत।